Magic software for hard disk repartition and Recovery Images !!! မှားဖျတ်မိတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအလွယ်ကလေးပြန်ရှာမယ်။ ကွန်ပြူတာထဲကပါတေးရှင်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်ခွဲမယ်!! | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on December 2, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	ကျွန်တော်ဒီပိုစ့်လေးကို Magic software လေးရှိရင်တင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားတဲ့ညီအစ်ကိုတွေအတွက်ရော ပြီးခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို Recovery လုပ်တဲ့ဆော့စ်ဝဲတစ်ခုတင်ပေးလိုက်တာ ပုံတွေသိမ်းတော့မှ ကီးတောင်းလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ဘော်ဘော်တွေအတွက်(တောင်းပန်ပါတယ်)ဒီဆော့စ်ဝဲလေးကိုမရမကရှာဖွေပြီးတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်2ယောက်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဒီဆော့စ်ဝဲလေးနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်ပါမယ်။ဒီဆော့စ်ဝဲလေးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကအများကြီးပါ။ Partition တွေကို Format ချနီုင်ခြင်း ၊ Partitionတွေကို လွယ်ကူစွာခွဲနိုင်ခြင်း ၊ အခြားလူမမြင်နိုင်အောင် Partition တွေကို Hide နိုင်ခြင်း ၊ ပေါင်းနိုင်ခြင်း ပထမဆုံး hard disk repartition ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာအောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။ပြီးတော့ မိမိကင်မရာ ၊ ဖုန်း ၊ မန်မိုရီကဒ် အစရှိသည်တို့မှာ မှားဖျတ်မိတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုပြန်လည်ခေါ်ယူလဲဆိုတာကိုတော့ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ပုံတွေနဲ့သေချာရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံး…
ဆော့စ်ဝဲလ်လေးကို အင်စတောလုပ်ပြီးရင် အခုလိုတွေ့မြင်ရပါမယ်။ Partition ခွဲမယ့်သူတွေအတွက်MiniTool Partition Wizard ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပုံမမြင်ရရင်နှိပ်ပြီးကြည့်ပါ….
ကျွန်တော်နမူနာအဖြစ် 2.89Gb ရှိတဲ့ အပိုင်းလေးကိုအရင်ခွဲပြပါမယ်။အရင်ဆုံးကိုယ်ခွဲချင်တဲ့ Driveပေါ်အရင်နှိပ်လိုက်ပါ။
နှိပ်ပြီးတာနဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ Split Partition ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အခုပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။အလယ်ကနေဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ပြီး ကြိုက်သလောက်ထားလို့ရပါတယ်။အဆင်ပြေရင် Ok နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါကတော့ မိမိ Format ချချင်တဲ့အပိုင်းကိုအရင်နှိပ်ပါပြီးရင် ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ Format Partitionဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။ ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီးရင်အိုကေနှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါကတော့မိမိ Drive ကိုသူများမမြင်စေရင် Hide လို့ရပါတယ်။အရင်ဆုံးမိမိ Hide မဲ့အပိုင်းကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင် ဘယ်ဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ Hide Partition ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါ။ တကယ်လို့ပြန်ဖျတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဖျတ်မဲ့အပိုင်းပေါ်နှိပ်ပြီး အပေါ်ဆုံးဘယ်ဘက်ထောင့်မှာUndo ဆိုတဲ့ မျှားပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
မိမိ ပြုလုပ်တာတွေပြီးဆုံးသွားလို့ အတည်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်ထောင့်အပေါ်ဆုံးမှာ အမှန်ချစ်လေး Apply ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Apply ကိုမနှိပ်မချင်းမိမိပြုလုပ်သမျှသူကအတည်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကြိုက်သလိုကလိနိုင်ပါတယ်။
ပြီးဆုံးသွားလို့ ဘောက်ကိုပိတ်တဲ့အခါသူကထပ်မေးလာပါမယ်။ မိမိပြုလုပ်တာတွေအတည်ပြုလားဆိုတာကိုပေါ့။ Yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်ပဲ ကလိကြပါ။ကျွန်တော်အချိန်သိပ်မရလို့ဒီလောက်ပဲရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဓါတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုပြန်ယူလဲဆိုတာကိုတော့ ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ပုံတွေနဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ www.mm-knowledge.com
This entry was posted in Recover Software, Software, System Repair. Bookmark the permalink.
← ★ Huawei G610-U00 ဖုန်းအား CWM(clock work mode)recovery တင်​နည်းနှင့်​ ​အော်​ရဂျင်​နယ်​ Stock recovery ပြန်​ထားနည်း	ပြည်​တွင်းပြည်​ပ​ ​နောက်​ဆုံးရသတင်း​တွေကို မိမိတို့ android ​ပေါ်က​နေဖတ်​ရှုနိုင်​မယ့်​ ✔ thefreenote v1.1 apk✔ →